တရုတ်မယားအဖြစ် ရောင်းစားခံ မြန်မာအမျိုးသမီးများအရေး ကုလက အစိုးရအဖွဲ့များကို ဖိအားပေးပါ – HRW
မွန်ပြည်နယ် တရားဥပဒေ စိုးမိုးရေးအတွက် စိန်ခေါ်ချက် လေးရပ်
မရိုးနိုင်တဲ့ ခေါင်းစဉ် အသက်မဝင်သေးတဲ့ စနစ်
Feature March 11, 2017
ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလုံး အညိုကွက်နှင့် အမဲကွက်များ စွဲကပ်နေပြီး ခြေချောင်းနှင့် လက်ချောင်းများက တစ်ဆစ်မှ မကျန်အောင် တုံးတိတိ၊ နားရွက်နှစ်ဖက်မှာလည်း တစ်ဝက်တစ်ပျက်သာ ကျန်ရှိတော့သည့် အသက် ၆၁ နှစ်ခန့် ရှိပြီဖြစ်သည့် အမျိုးသမီးကြီးတစ်ဦးမှာ ကုဠနူနာရောဂါဟု ပါဠိဘာသာတွင်ခေါ်ဝေါ်သည့် အနာကြီးရောဂါကို သက်လတ်ပိုင်း အရွယ်ကပင် စတင်ခံစားခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ အပေါက်နှစ်ပေါက်သာ...
Feature August 19, 2017
“လက်ရှိရော်ဘာဈေးက “နွားထီးငါးကျပ်၊ နွားမငါးကျပ်“ ဆိုသလိုပဲ။ အရည်အသွေးကောင်းအောင်လုပ်ပြီးမှ ရောင်းလည်း အချိန်ကုန်၊ ငွေကုန်၊ လူပင်ပန်း ရတာပဲအဖတ်တင်တယ်။ ဝယ်လက်ပေးတဲ့ဈေးနှုန်းက အရည်အသွေးကောင်းတာ၊ မကောင်းတာအကြားကွာဟချက် ဘာမှ မရှိတဲ့အခြေအနေပဲ...“ လက်ရှိကာလ မွန်ပြည်နယ် ရော်ဘာဈေးကွက်တွက် ရောင်းဝယ်ရာ၌ အရည်အသွေးအနိမ့်၊ အမြင့်အလိုက် ဈေးနှုန်းကွာခြားမှုကျဉ်းမြောင်းခြင်းအပေါ် ချောင်းဆုံမြို့နုယ် ဘိုးနက်ကျေးရွာမှ ရော်ဘာတနိုင်တပိုင်...
Feature July 24, 2018
ဆုံးရှုံးနစ်နာမှုရှိနေသော အခွန်ဝင်ငွေများ၊ မွေးမြူနေလျက်ဈေးကွက်မလုံခြုံမှု၊ ဥပဒေစိုးမိုးမှုဆိုင်ရာ ပြဿနာများကြောင့် ခြိမ်းခြောက်ခံနေရသည့် မွန်ပြည်နယ်စီးပွားဖွံ့ဖြိုးမှုနှင့် ထုတ်ကုန်စွမ်းအားတို့အပေါ် ပြည်နယ်အစိုးရက မည်သို့စီမံနေပါသနည်း။ မူဝါဒက မည်သို့ရှိပါသနည်း အသားကဏ္ဍ ယိုပေါက် အထွေထွေ မြန်မာနိုင်ငံကို ထိုင်းနိုင်ငံမှ ကြက်နှင့် ဝက်များ တရားမဝင်လမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့် နေ့စဉ် ဝင်ရောက်မှု ရှိနေ၍ ပြည်တွင်း မွေးမြုရေး လုပ်ငန်းရှင်...
Feature May 6, 2017
စွန့်ပစ်ထားသည့် ပလတ်စတစ်အိတ် အစုတ်အပြတ်များ၊ သုံးမရသည့် ရေသန့်ဗူးခွံများ၊ စားပြီး ပစ်ထားသော ဖရဲသီးခွံ အပုပ်များနှင့် အုန်းသီးခြမ်းကွဲ အခြောက်များ၊ တခြား သုံးမရသည့် အမှိုက်များသည် ကမ်းခြေဝန်းကျင်တွင် နေရာအနှံ့တွင် ပြန့်ကျဲ လျက်ရှိနေတော့သည်။ ထိုမျှသာမက ဟိုနားတစ်ပုံ၊ ဒီနား တစ်ပုံ ရှိနေသည့် အမှိုက်ပုံများသည်လည်း ကမ်းခြေ...
Feature September 27, 2016
ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် တာဝန်ကျသည့် ဆရာဝန်များဆေးရုံများသို့ အချိန်မီမရောက်ရှိပါကအရေးယူတော့မည် ဖြစ်ကြောင်းယခုလအတွင်းတာဝန်ရှိသူများကစတင်ပြောကြားလိုက်သည်။ ယင်းမှာခေတ်အဆက်ဆက်ကလိုအပ်ချက်များနှင့် ပြည့်နှက်နေသော ပြည်သူ့ဆေးရုံများ၏ ဝန်ဆောင်မှုများယခုအစိုးရလက်ထက်တွင် စတင် ပြောင်းလဲလာမည့် ခြေလှမ်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။ ကျန်းမာရေးဝန်ကြီးဌာနကဖွင့်လှစ်ထားသောဆေးရုံများတွင် ပြည်သူများ၏ ကျန်းမာရေးကိုစောင့်ရှောက်ရေးအတွက် စတင်ပြောင်းလဲလာမည့် ယင်းအစီအစဉ်ကိုကျန်းမာရေးအသိုင်းအဝိုင်းနှင့် ပြည်သူများကကြိုဆိုကြသည်။ အခြေခံလူတန်းစားများအဓိကအားထား၍ ကုသနေရသည့် ပြည်သူ့ဆေးရုံများတွင် တာဝန်ချိန်၌ ဆရာဝန်များအချိန်မှန်မှန်ရှိရမည်ဆိုခြင်းမှာမထောက်ခံစရာအကြောင်းမရှိသည့် ကိစ္စတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းဆရာဝန်တစ်ဦးလည်းဖြစ်ပြီး ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်တစ်ဦးဖြစ်သူ...
စွန့်ပစ်ခံ ရင်ခွင့်မဲ့ ဘဝများ
Feature March 16, 2017
“ဝေး..အမေတို့ ပြန်လာပြီ” ဟူသော အသံနှင့် အတူ ဟင်းချက်တမ်း ကစားနေကြသည့် အသက်ခြောက်နှစ်မှ ဆယ်နှစ်အရွယ် ကလေးငယ်ခြောက်ဦးမှာ လက်ထဲရှိ ကစားလက်စ ပစ္စည်းများကိုချကာ ခြံဝင်းထဲသို့ ဝင်လာသည့် လိုက်ထရပ်ကားဆီသို့ မြူးထူးစွာဖြင့် အပြေးအလွှား ရောက်ရှိသွားကြသည်။ ကားနောက်ခန်းတွင် သက်လတ်ပိုင်းအရွယ် အမျိုးသမီးနှစ်ယောက်ပါလာပြီး တစ်ပတ်စာအတွက် ကြိုတင်စုဆောင်း ဝယ်ယူထားဟန်ရှိသော...
By စိုင်းဇော်/Myanmar Now 11/06/2019 ရွာသူကြီး လုံးခမ်းစံသည် ရွာသားများရှေ့တွင် ခေါင်းကို သေနတ်နှင့်ချိန်ခံထားရသည်။ ဘုန်းကြီးကျောင်းတွင် စုဝေးနေရသည့် ဒေသခံ အများအပြားလည်း အခြေအနေကို ရင်တထိတ်ထိတ် လှမ်းကြည့်နေကြသည်။ အချိန်မှာ တပ်မတော်အစိုးရလက်ထက် ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ဖြစ်ပြီး ဒေသခံတို့မှာ ရှမ်းပြည်နယ်၊ ကျေးသီးမြို့နယ် ဆွမ်မွန်းရွာမှ ဖြစ်ကြသည်။ ရွာသူကြီးကို ဖိအားပေးသည့် အကြောင်းရင်းမှာ...